Mbola ny ekipan’i Toliara hatrany no mitana ny laharana voalohany vonjimaika amin’ny filaharana ankapobeny amin’ny fiadiana ny Tournoi Pangalanes eo amin’ny taranja beach soccer, sokajy lehilahy. Fifaninanana tanterahina eny amin’ny tora-pasik’i Manakara Be. Mbola tsy …Tohiny
Araka ny fandaharam-potoana, dia omaly no nanatanterahana ny fandorana ny nofo mangatsiakany. Nampihetsi-po ny veloma farany natao an’i Tsilavina Ralaindimby. Omaly maraina, mbola maro ireo tonga nidodododo namangy sy nitondra teny fampiononana ho an’ny fianakavian’Itompokolahy, …Tohiny
Maorisy : Vehivavy gasy nahatrarana héroïne 259,5g
Tsy mitsahatra handrenesam-peo ny fahatrarana teratany malagasy manondrana zava-mahadomelina mahery vaika atsy amin’ny nosy rahavavy Maorisy. Vehivavy iray, 36 taona indray mantsy no tra-tehaka niaraka tamin’ny “héroïne” milanja 259,5 grama tao amin’ny seranam-piaramanidina any Plaisance …Tohiny
Fandresena telo, faharesena iray. Izay no vokatra azon’ny Ascut Atsinanana, hatreto, tao anatin’ny efatra andron’ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny Tournoi Pangalanes 2018 eo amin’ny taranja basikety, sokajy N1A lehilahy. Fifaninanana mizotra amin’izao fotoana izao aty …Tohiny
Ministry ny Fanabeazam-pirenena nandritra ny efatra taona i Paul Rabary, tsy isan’ireo minisitra notànana tamin’ity governemanta Ntsay Christian ity ary vao avy nanao fanambarana niteraka resabe farany teo. Mikasika izay fihetsika nasehon’i Paul Rabary izay ...Tohiny